XOG RASMI AH: Madaxtooyada Soomaaliya oo doonaysa in xilka laga qaado Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Faderaalka? – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Madaxtooyada Soomaaliya oo doonaysa in xilka laga qaado Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Faderaalka?
MUQDISHO(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn isku soo taraya xogaha sheegaya in ay Madaxtooyada Soomaaliya abaabulayso mooshin ka dhan ah gudoomiye kuxigeenka 1aad ee baarlamaanka Faderaalka Cabdiweli Sh Ibraahim Muudeey, oo mar ahaa laacibka ay guddoonka ku dhex leedahay Madaxtooyada Soomaaliya.
Mooshinkan ayaa gaaray halkii ugu sareysay, waxaana aad ugu ole-oleynaya xildhibaanada aadka ugu dhaw Madaxtooyada Soomaaliya, lama garanayo is qabadka dhinacyadu halka uu kasoo bilowday, balse saameyntiisa ayaa hadda banaanka u soo baxday.
Xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay in uu ka bilowday markii uu Mr, Muudeey bilaabay in uu ka soo horjeesto aragtida Madaxda sare, gaar ahaana uu sababsaday balan looga baxay waqtigii kursiga baarlamaanka laga qaadayay Mr, Jawaari.
Mucaaradku uma arkaan fursad-weyn oo ay ku difaaci karaan Muudeey, oo ay doonayaan in uu ka baxo meesha, halka taas bedelkeeda ay xooga saarayaan in uu soo baxo mid kamid ah saaxiibadooda.
Madaxtooyadu waxay doonaysaa in guddoonka baarlamaanka oo dhan uu noqdo dad ayaga taabacsan, taas badalkeedana loo baahan yahay in Gudoomiye kuxigeenka koowaad la saaro,laguna bedelo mid kamid ah xubnaha golaha wasiiradda oo horey xilkan tartan ugu galay.
Mooshinka ayaa lafilayaa in todobaadka bilaaban doono bartamihiisa uu banaanka u soo baxo, waxaana haddii uu soo baxo ay ka dhigan tahay dhabarjab kale oo soo wajahay baarlamaanka Soomaaliya.
Mr, Muudeey wuxuu horey uga guuleystay tartan doorasho Faarax Sheikh Cabdulqaadir oo ay isku beel ka soo jeedaan, waxaana hadda bilaaban kara loolan kale oo siyaasadeed, kaas oo saameyntiisa ay halis badan tahay in uu ku yeesho kuraasta baarlamaanka iyo hayaddaha dawladda qaarkood.